PostmarketOS ၏ကျေးဇူးကြောင့် Kobo Clara HD တက်ဘလက်ဖြစ်လာသည် eReaders အားလုံး
Joaquín Garcia က | 19/07/2021 10:30 | စာဖတ်သူများ, Kobo
ဖတ်သူများအနေဖြင့်ကောင်းမွန်စွာကုသနိုင်ပါကရှည်လျားသောအသက်တာရှိသည်။ သို့သော်ရှည်လျားသောအသက်တာရှိသော်ငြားသုံးစွဲသူများသည်ပုံစံအသစ်များ၊ ပရိုဂရမ်အသစ်များ၊ အသစ်ပြောင်းခြင်းများနှင့်စသည်ဖြင့်ထောက်ပံ့မှုနှင့်သဟဇာတရှိခြင်းကိုရပ်တန့်သည့်အချိန်ရောက်လာသည်။
Amazon, Kobo, Onyx Boox, Tagus စသည်တို့မှ ereaders အချို့အတွက်ဖြစ်ပျက်သည်။
ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးကြားမှဒီပစ္စည်းကိုဘဝသစ်တစ်ခုပေးဖို့အခြေခံတဲ့စီမံကိန်းတွေရှိတယ်။ ဒါကစီမံကိန်းကိစ္စဖြစ်ပါတယ် Android သို့မဟုတ် Linux kernel ပါသောကိရိယာအဟောင်းများအားအသက်ပေးခဲ့သော PostmarketOS။ ဘ ၀ သစ်ကိုပေးစွမ်းနိုင်သည့်ကိရိယာများအနက်မှတစ်ခုမှာလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော Kobo Clara HD ဖြစ်ပြီး Kobo Rakuten eReader ဖြစ်သည်။
PostmarketOS သည် Alpine Linux gnu / linux ဖြန့်ဖြူးမှုကိုအခြေခံသည့်အခမဲ့စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ဒီဖြန့်ဖြူးကြောင်း software ကိုအသုံးပြု။ အာရုံစိုက် တပ်ဆင်ရန်နှင့်လည်ပတ်ရန်အတွက်အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်နှင့်စွမ်းအားနိမ့်သောဟာ့ဒ်ဝဲလိုအပ်သည် ခရီးဆောင်နှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ပေါ်မှာ။ ဒီ operating system ကိုထောက်ပံ့သောအဓိကထုတ်ကုန်များသည်စမတ်ဖုန်းများဖြစ်သည်။ သို့သော်လက်ရှိနှင့် PostmarketOS ရှိကောင်းရှိနိုင်သည့်တက်ဘလက်များနှင့်ဖတ်ရှုသူများအတွက်မော်ဒယ်များစွာရှိသည်။
PostmarketOS သည် Kobo Clara HD ကိုပြုလုပ်သည် သင့်ရဲ့အာမခံထဲမှာမပါဝင်ပါအကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပစ္စည်းကို ၀ ယ်လိုက်ပြီဆိုပါကအနည်းဆုံးအာမခံချက်ကိုဂရုစိုက်ပါက၎င်းကိုလုပ်ရန်မသင့်လျော်ပါ။
El Kobo Clara HD ကို ၎င်းသည် Linux kernel ပါ ၀ င်သောကြောင့်စက်ပစ္စည်း၏မှတ်ဉာဏ်ထဲရှိဖိုင်အချို့ကိုပြုပြင်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုအီလက်ထရောနစ်မင်ဖန်သားပြင်ဖြင့်တက်ဘလက်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
PostmarketOS wiki ရှိစက်ဖိုင်ကိုကြည့်ပါကအလုပ်မလုပ်သေးသောအရာများရှိနေသေးသည်ကိုတွေ့ရသော်လည်း၎င်းမှထွက်ပေါ်လာသည်။ ဒီ element တွေကို Kobo Clara HD မှာမရနိုင်ပါ ကင်မရာ၊ ခေါ်ဆိုမှုများသို့မဟုတ် 3D အရှိန်ကဲ့သို့သော။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်ဒြပ်စင်မှအလုပ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်သွားစေနိုင်သည့်အန္တရာယ်မရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့ installation ကိုလုပ်နိုင်သည်။
PostmarketOS ဝီကီ၌ငါတို့ရှာပါ installation နည်းလမ်းကို ၎င်းင်း၏မှန်ကန်သောလည်ပတ်မှုအတွက်လိုအပ်သောသင်ခန်းစာများ။ ထဲမှာ gitlab repository ကို သင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအသင်းရဲ့ \_ t jetomit က၎င်း၏တပ်ဆင်မှုအတွက်လိုအပ်သောဖိုင်များကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်.
ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် eReader တွင်ရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမဟုတ်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကငါတို့ပြောခဲ့တယ် Kindleberry Piအဖြစ် Kindle မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုသောစီမံကိန်း Raspberry Pi နှင့်အသုံးပြုရန် E-ink မော်နီတာ။ Kobo Clara HD ကိစ္စတွင် developer များကစနစ်ကို ereader တွင်ထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်ကြသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာဤကိရိယာ၏စွမ်းအားသည် Kindleberry Pi ပြုလုပ်သည့်ပထမဆုံး Raspberry Pi ထက်မပိုပါကချွေတာသောကြောင့်ဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ကိုဒြပ်စင်များနှင့်အများဆုံးခရီးဆောင်စီမံကိန်းကိုဖြစ်ခြင်း။
PostmarketOS ကို Kobo Clara HD တွင်တပ်ဆင်ခြင်းသည်သဘာဝကျပါသလား။
သင်၏စီမံကိန်းဖတ်သူများနှင့်ဖြစ်ပျက်လာမည့်အရာများကိုစီမံကိန်းဖန်တီးသူများသာမကကျွန်ုပ်တို့လည်းဂရုမစိုက်ပါ။ စာကိုနောက်သို့ လိုက်၍ အလုပ်လုပ်စေသူများစွာရှိသည်။ အမှားအယွင်းများရှိနိုင်ပြီးစာဖတ်သူအလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Kobo Clara HD software ၏ပုံရိပ်လည်းမရှိသောကြောင့်တစ်စုံတစ်ခုမှားယွင်းသွားပါကကျွန်ုပ်တို့ ပြန်၍ မရနိုင်ပါ။ ဒါက Kobo Clara HD မှာဒီကိုထည့်သွင်းတာကဘာလဲ။ ဒီအကြောင်းကိုငါတို့ရေးတဲ့အချိန်မှာပြောရမယ် သေးငယ်ပြီးစျေးသိပ်မကြီးသည့် e-ink မော်နီတာတစ်ခုသာရှိရန်လုပ်ဆောင်သည် ပြက္ခဒိန်ကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ အီးမေးလ်စစ်ဆေးခြင်းစသည်တို့ကဲ့သို့သေးငယ်သောအရာများကိုလုပ်ဆောင်ရန်။ သို့သော်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုခြင်း၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်း၊ ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဂိမ်းစက်တစ်ခုအနေဖြင့်စက်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုခြင်းတို့မှရှောင်ရှားနိုင်သည်။
စာဖတ်သူကိုရောင်းနေဆဲနှင့်မွမ်းမံမှုများလက်ခံရရှိနေဆဲဟုယူဆသောကြောင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၊ ကိရိယာမွမ်းမံသည့်အခါ PostmarketOS ကိုထည့်သွင်းခြင်းသည်မှားသည်။ PostmarketOS ကို install လုပ်ရင်ကောင်းမယ် အီးမေးလ်သို့မဟုတ်ပြက္ခဒိန်ကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်၎င်းကို e-ink မော်နီတာသို့မဟုတ်အလယ်တန်းဘောင်ကွက်အဖြစ်သုံးပါ သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? သင်သည်ဤ Kack Clara HD ကိုသင်ဤ hack ကိုပြုလုပ်မည်လားသို့မဟုတ်၎င်းကိုရိုးရှင်းသော ebook reader အဖြစ်သိမ်းထားမည်လား။ စာဖတ်သူများသည်အီလက်ထရောနစ်မှင်ပြားအဖြစ်ဒုတိယဘဝသက်တမ်းရှိသည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » စာဖတ်သူများ » PostmarketOS ကျေးဇူးကြောင့် Kobo Clara HD တက်ဘလက်ဖြစ်လာသည်
စာဖတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သူများအတွက် Amazon မှ ၀ န်ဆောင်မှုအသစ် Kindle Vella